Xogta Isku duubista Natiijooyinka Google - Khabiirka Kala Duwan
Dad badan oo websaydh, barnaamijyo,. Waxay soo saaraan bogagga internetka ee la doonayo iyo xogta dhoofinta qaababka CSV iyo qaababka JSON. Qaar ka mid ah qalab yareey ayaa la soo saaray bilihii dhawaa, laakiin kuwa ugu caansan ayaa lagu sheegay hoos.
1. Soo dejinta - best bankruptcy lawyers in baltimore. Io:
Waa adeeg faa'iido leh oo lagu xoqayo kumanaan Google xiriirka gudahood toban daqiiqo gudahood. Iibsiga. Haa, waxaad dhisi kartaa xogtaada gaarka ah iyo xogta dhoofinta xogta CSV iyo JSON faylasha. Qalabkan uma baahnid inaad ku qorto koodh wuxuuna leeyahay 1000+ API si uu u guto hawshiisa. Waxaa si fiican loo yaqaan tiknoolajiyada barashada mashiinka iyo in la helo macluumaad sida doonistaada. Barnaamijka bilaashka ah ayaa haatan loo heli karaa Mac OS X, Windows iyo Linux. Soo dejinta. Io ma aha oo kaliya sawir gacmeed laakiin sidoo kale wax soo saaraha xogta iyo ciriiriga.
Iyada oo Webhose ah. Si toos ah, waxaad si toos ah u heli kartaa xogta waqtiga-dhabta ah oo kakooban kumanaan Google xiriirka marka ay dhacaan daqiiqado. Webhose waxaa loo yaqaanaa tiknoolajiyada barashada mashiinka waxeeyna u bedeli kartaa xogtaada in ka badan 120 luuqadood. Sidoo kale, waxay badbaadisaa natiijooyinka qaabab sida JSON, RSS iyo XML. , Barnaamijka iyo ganacsatada waxay isticmaalaan Webhose. iyo in la xoqo warbaahin kala duwan iyo portals safarka iyo si toos ah u soo qaad macluumaadka si ay hardanka adag.
CloudScrape, oo loo yaqaan Dexi. io, waa adeeg dhammaystiran oo loo isticmaalo in Google lagu tuuro dhowr daqiiqadood. Waxay ku habboon tahay ganacsatada waxayna badanaa bartilmaameedsadaa bogagga internetka. Spammers waxay adeegsadaan adeeggan si loogu daabaco nuxurka boggaga internetka ee goobaha kala duwan. Waxay bixisaa tifaftiraha ku salaysan shabakada oo isticmaala bots si aad u gurguubto bogaggaaga boggaaga iyo akhri xogta waqtiga dhabta ah. Waxaad si sahlan u keydsan kartaa xogta la soo saaro Google Drive ama Box. shabeel ama waxay u dhoofisaa JSON iyo CSV.
Haddii aad raadinayso inaad ku xoqayso 1,000 xiriiriye Google ilaa shan ilaa toban daqiiqo, Scrapinghub waa qalab sax ah. Waa darawaliinta xogta daruuriga ku salaysan iyo barnaamijka macdanta qodista oo leh qaabab badan iyo sifooyin. Scrapinghub waxaa badanaaba loo isticmaalaa kambiyuutarrada si ay u soo saaraan nuxurka webka oo qiimo leh oo leh leyliye firfircooni leh si aad shaqo u hesho si habboon.
5. Muuqaal Sawirle:
Sawir sawir leh, waxaad si sahlan u beegsan kartaa ugana xoqin kartaa in ka badan laba kun oo isku xirnaanta Google ah oo ku saabsan arrin ilbiriqsi. Waa mid ka mid ah kuwa ugu qurxinta badan oo caanka ah shabakadda webka iyo barnaamijyada soo saaridda xogta. Xogta waxaa loo dhoofin karaa qaabab sida SQL, JSON, XML, iyo CSV. Waxaad si sahlan u uruurin kartaa, kormeeri kartaa oo u saari kartaa nuxurka webka iyada oo la taaban karo dhibicda dhibic-iyo-guji. Si loo hubiyo ilaalinta dadka isticmaala, Google waxa uu hirgeliyay dhowr istaraatiijiyooyin waxana uu ku weydiinayaa inaad si joogto ah u gelisid xabsiga. Waxay micnaheedu tahay haddii aad u dirto labaatan codsi oo ku socda makiinada raadinta, qaar ka mid ah ayaa la diidi doonaa isla markiiba haddii aan si rasmi ah loo gelinin si sax ah. Google ayaa looga golleeyahay in looga hortago in dadka isticmaala ay xajistaan ​​xiriirinta mashiinka raadinta, laakiin qalabyada kor ku xusan waxaa loo isticmaalaa in laga soo saaro macluumaadka bogagga iyo blogyada.